အဆိုပါထိပ်တန်းဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယို Recorder ပလက်ဖောင်းများ
ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ တီဗီ & ပြဇာတ်ရုံ
by အာဒံကို Thursby
လူအတော်များများ DVR ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးသားသား, သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီဒါနှင့် ပတ်သက်. ငြင်းခုံသူတို့ရဲ့ pluses နှင့် minuses ရှိတယ် "အကောင်းဆုံး!" တစ်ဦး moot အချက်ဖြစ်လာသည်။
အဘယ်အရာကိုကိစ္စဘာအသီးအသီးပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းမှုနှင့်သင်သည်ထိုအင်္ဂါရပ်ထားဖို့လိုခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော အဲဒီနည်းလမ်းများစွာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ DVR ပလက်ဖောင်းမှာလည်းတူညီသယ်ဆောင်ကပြောသည်။ အဖြစ်အများကြီးသူတို့ကွာခြားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, အချို့ features တွေအများအပြားစနစ်များကိုမှထည့်သွင်းလျက်ရှိသည်။ ဒါက DVR လုပျနိုငျနှင့်ပင် "DVR" ၏အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အရာကိုအလွန်ကြီးစွာသောချဲ့ထွင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မူပိုင် Tivo Inc ကအာဒံကို Thursby
1999 ခုနှစ်တွင်မူလပစ်လွှတ်ကတည်းက TiVo အိမ်ထောင်စုနာမကိုအမှီဖြစ်လာသည်။
တစ်ဦးကလက်ရှိ TiVo ကို Premiere DVR သငျသညျကို select မော်ဒယ်နှင့်စာချုပ်ပေါ် မူတည်. $ 99 မှ $ 499 ကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်ငှားရမ်းထား DVR နှိုင်းယှဉ်သောအခါ, ရှေ့ပြေးကုန်ကျစရိတ်အများကြီး သာ. ကွီးမွတျသျောလညျးသငျတာပိုကောင်းအတွေ့အကြုံကိုရတဲ့နေနှငျ့အတူရှိ၏။
မသာ TiVo သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာ Add-ons တွေကိုအများကြီးရမယ့် Feature-rich DVR အတွေ့အကြုံကိုပေးပါဘူး။ သူတို့ဟာအနှစ်တလျှောက်လုံးဒေသခံနှင့်အင်တာနက်နှစ်ခုစလုံးအကြောင်းအရာ access ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆက်လက်ပါပြီ။ အမေဇုံ VoD, Netflix နှင့်ပန်ဒိုရာရုံများမှာ ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကအနည်းငယ်ကို တစ် TiVo ကိရိယာနှင့်အတူဖြစ်သည်။
စိတျထဲမှာထားရန်တစ်ခုခု TiVo တစ်ဦးသည်လစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေမသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ထပ် "
Windows Media Center ကို
Windows7ကိုမီဒီယာစင်တာပင်မမျက်နှာပြင်။ အာဒံကို Thursby
Microsoft ရဲ့ပလက်ဖောင်းအမြဲယင်း၏နိဒါန်းကတည်းကနယ်ပယ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့် TV မှတစ်ဦးကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းသွားထံမှဆော့ဖ်ဝဲကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ကွန်ပျူတာများ, စျေးနှုန်းတစ်ခုဖြည့်စွက်၏ကုန်ကျစရိတ် drop ဆက်လက်ကြသော်လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆင်သင့် tuner သင့်ရဲ့ service provider ကရဲ့ STB အတော်လေးမြင့်မားသည်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းများအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်း။
ဒါကမီဒီယာစင်တာကိုသုံးပြီးသင်တီဗီထုတ်လွှင့်မဆိုကြင်နာခံယူနိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်ဟုပြောသည်။ ကေဘယ်လ်ထံမှ Over-the-air, သင်လိုအပ်သမျှကို install ညာဘက် tuner ဖြစ်ပါတယ်။ hard drive တွေသည့်အချိန်တွင်မဆိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်ကတည်းကသင်သည်ထဲက run ဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှ မှတ်တမ်းတင်အာကာသ ။
တစ်ဦး, Xbox 360 ကိုသုံးပြီး, သင့်အိမ်တော်၌မဆိုတီဗီမီဒီယာစင်တာကို PC မှာချိတ်ဆက်ထားနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတီဗီအဖြစ်ကိုအခြားက Shared အကြောင်းအရာခံယူနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် "
SageTV ဗားရှင်း7SageTV © UI ကို Image ကိုဖတ်ရှုဖို့စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောပါရှိပါတယ်။ အာဒံကို Thursby
Windows ကိုနဲ့တူတာကို မီဒီယာစင်တာတွင် , SageTV သင့်ရဲ့ PC ကိုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နှင့် DVR လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြား features တွေပေးစွမ်းသည်။
တစ်လေ့လာလိုက်စားဆော့ဖ်ဝဲပို SageTV Media Center ကိုထက်ကမ်းပါးမတ်သင်ယူမှုကွေး၏နည်းနည်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ software ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ core ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်တက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်းထုတ်ကုန်န်းကျင်လာခဲ့သည်နှင့်အတွေ့အကြုံတိုးချဲ့ဖို့အများကြီးအပို plugins ကိုပေးထားပြီပဲ။
Sage မတဦးတည်းကိစ္စမရှိဇာတိ CableCARD ထောက်ခံမှုသည်နှင့်မ HD ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် cable ကိုဆိုလိုတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဲဒီမှာဒီပတ်ပတ်လည်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ကြောင့်အချို့သောအပျနှံနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအဘို့အရာတစ်ခုခုပါပဲ။
ကုမ္ပဏီ၏ဟာ့ဒ်ဝဲ Extender တွေအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်အိမ်ရှိပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်တစ်ဦးကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်ဘယ်မှာကမ္ဘာတွင်မယ့်သင့် TV စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
ဒီကနေ့ရဲ့ဟင်းလျာကွန်ယက် VIP 922 DVR ၏တပ်ဦးပုံရိပ်။ ပန်းကန်ကွန်ယက်
သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပေမယ့် ပံ့ပိုးပေး DVRa"ကိုထိပ်တန်း 5" စာရင်းဝင်ဒါပေမယ့် DVRs မှကြွလာသောအခါ, ဒီကနေ့ရဲ့ဟင်းလျာကွန်ယက်နှင့်အောက်ပါ DirecTV အမှန်တကယ်တစ်လျောက်ပတ်သောအလုပ်ပွုပါပွီစာရင်း။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်သည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သင်ထိုကဲ့သို့ TiVo အဖြစ် platform ပေါ်တွင်ဇွန်းကွန်ယက်ရဲ့ VIP 922 ကိုသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်တစ်ဦးကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တီဗီသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတီဗီကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားခြင်းတံ့သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသို့မဟုတ်အပို features တွေရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်။
အဖြစ်ကောင်းစွာ, cable ကိုကုမ္ပဏီ DVRs မတူဘဲဒီကနေ့ရဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ UI ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့တော်တော်ကောင်းသောအလုပ်ပြုတော်မူပြီ။ နောက်ထပ် "
အများကြီးဒီကနေ့ရဲ့ဟင်းလျာကွန်ယက်ကဲ့သို့ DirecTV ဖောက်သည်များအတွက်လျောက်ပတ်သော UI ကိုပေးခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါလေထုထဲတွင်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းအသစ်တခု TiVo-loaded device ကိုဖွင့်ဖို့ကတိထားတော်မူပြီ။
DirecTV မိုဘိုင်း app များကိုပူဇော်မနေစဉ်, သူတို့မှအကြောင်းအရာ streaming များခွင့်ပြုရသေးရှိသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုကဒီအာကာသအတွင်းဖွင့်တွင်စတင်အဖြစ်, သငျသညျသူတို့အလုပျရှေ့မှာရှည်လျားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်အပေါ် DirecTV ရှိပါတယ်တစ်ခုမှာအားသာချက်သင့်ရဲ့အိမျတျော၌မဆိုတီဗီကျွေးမွေးဖို့တစ်ခုတည်း DVR သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တပြင်လုံးကိုနေအိမ်ဝန်ဆောင်မှုအထိ 15 နဲ့အခြားရုပ်မြင်သံကြားမှတီဗီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်များစွာသောလူအဘို့နှင့် Time Warner ကိုကသူတို့ရဲ့အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသအတွက်လက်ရှိအချိန်တွင်သာရရှိနိုင်မယ့်တစ်ဖွဲ့လုံး-အိမ်မှာဝန်ဆောင်မှုကိုထုတ်လှိမ့်ဖို့စတင်နေပြီစဉ်တောင်းဆိုနေတာခဲ့ကြကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ နောက်ထပ် "
အဆိုပါ Onkyo TX-NR555 Dolby Atmos မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Receiver ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
ဗင်္ဟုရ၏သား: 50 နှစ်မြောက်လီမိတက် Edition ကို
Yamaha လင်းမ်သည်-ကိုယ်ရေးဖိုင်မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Receiver ကြေညာ
Epson PowerLite မူလစာမျက်နှာရုပ်ရှင်ရုံ 710HD 3LCD Projector
SID Display ကိုအပတ် 2014 - အစီရင်ခံစာနှင့်ဓာတ်ပုံများ
Hulu Plus အားလွှသတ်မှတ်ထားစုစည်းမှု
Panasonic က TC-P50GT30 3D ကွန်ယက် Plasma တီဗီ - ဓာတ်ပုံကိုယ်ရေးဖိုင်
အဆိုပါ ZVOX အသံ SB400 နှင့် SB500 အသံဘား Profiled
ဆီလီကွန် Image ကို AV စနစ်ထုတ်ယူခြင်း Chip နှင့်အတူ 8K စိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံ
Windows Vista ကရှိဒေတာ Backup ကိုနှင့် Restore
အဆိုပါ Polk အသံချဲ့တစ်ခုမှာအသံဘား subwoofer စနစ်
သင့်ရဲ့ Hard Drive partitioner ကရန် GParted ကိုသုံးပါရန်ကိုဘယ်လို
Windows Vista ကအတူဝေမျှမယ် Mac အတွက်ဖိုင်များ - OS X ကို 10.5 အတူ file ကိုမျှဝေခြင်း
Wren V5BT ဘလူးတုသ်နာယကဆန်းစစ်ခြင်း
All-in-One (AIO) တို့မှပရင်တာ HP ရဲ့နိုင်စွမ်း OfficeJet Pro ကို 7740 Wide Format ကို
ဘယ်လိုပူးတွဲအလိုအလျောက်မှ: နှင့် Bcc: သင် Outlook နဲ့များတွင် Send အားလုံးအီးမေးလ်
Mozilla Thunderbird ထဲသို့ Skype ကိုပေါင်းစပ်
IPhone ကိုဒေတာများကို Roaming Charges ပြိုင်ပွဲလုပ်နည်း
LRC စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: သင့်ရဲ့ဂီတငွေကောက်ခံဖို့ကာရာအိုကေ-စတိုင် Lyrics Add
တစ်ဦး external hard drive ပေါ်မှာ Backup ကို မှစ. iTunes Restore လုပ်နည်း
ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်း google - ဂျီပီအက်စ်သင်တန်းနှင့်ပုံထုတ်ခြင်း
8 ပရီမီယံ Movie, လွှန်ဆောင်မှုများ
ITunes ကို iPhone & iPod အတွက်မိတ္တူပွားသီချင်းများကိုဖျက်ပစ်ရန်ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦး SIP Softphone App ကို Configure လုပ်နည်း
အဆိုပါ Photoshop ကို Marquee Tool အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
7th Generation အဖွဲ့, iPod nano ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Command Prompt ကို မှစ. Device Manager သုံးစွဲနည်းကိုဘယ်လို
HoloLens: Microsoft ရဲ့ရောနှောထားသော reality headset မှာတစ်ဦးကမျှော်